Fampandrosoana eny ifotony: manjavozavo ny fitantanana ao Mahereza - ewa.mg
Fampandrosoana eny ifotony: manjavozavo ny fitantanana ao Mahereza
News - Fampandrosoana eny ifotony: manjavozavo ny fitantanana ao Mahereza
Tsy mazava. Nambaran’ny
loharanom-baovao iray fa manjavozavo ny fitantanana ary ahina ny
fisian’ny fanodinkodinam-bola ao amin’ny kaominina Mahereza,
Ambohidratirmo, tantanan’ny ben’ny Tanàna, Rabenandrasana.
« Tsy vitan’izany fa eo koa ny fanamparam-pahefana ataony
amin’ireo mpiasa sasany. Mandidy manapaka amin’ny fitantanam-bola
ary tereny hamoaka vola araka ny tiany ny tompon’andraikitra
amin’izany”, hoy ny loharanom-baovao. Voalaza fa manao ny
fomba rehetra androahana mpiasa sasany eo anivon’ny kaominina ny
ben’ny Tanàna ka hamoronany antony ireo mpiasa hampidirany ny
fianakaviany amin’ireo toeran’ny mpiasa kasaina horoahina ireo. Tsy
manaraka dingana na fenitra ny fakany vola eo anivon’ny kaominina
ary tsy manome taratasy fanamarinana momba izany izy. “Nividy
solosaina entin-tanana miisa roa, 800 000 Ar, izy. Tsy mbola tonga
ao amin’ny kaominina anefa izany hatramin’izao. Miditra avy hatrany
any aminy ny vola fa tsy ao amin’ ny kitapombolan’ny kaominina
rehefa misy olona nangataka fahazon-dalàna hanorina fasana”,
hoy ihany ny loharanom-baovao.
Manampy ireo ny eo amin’ny
fitantanana ny kaominina. Zary lasa raharaham-pianakaviana izany.
Lefitra voalohany ny dadatoany ary mpandray vola kosa ny zanaky ny
dadatoany raha mpanolotsaina azy ny vadiny.
L’article Fampandrosoana eny ifotony: manjavozavo ny fitantanana ao Mahereza a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 10/09/2020
Baolina lavalava- Analamanga :: Mitaky ny hiverenan-dRavelojaona Andry ny ankamaroan’ireo seksiona
Naharitra herintaona ny fahabangana eo amin’ny Ligin’Analamanga, taranja baolina lavalava. Mbola tsy misy filohan’ny ligy hatramin’izao. Nanapa-kevitra ny ankamaroan’ireo Seksiona eto Analamanga (Avaradrano, Atsimondrano, Ambohidratrimo ary Antananarivo renivohitra) ny nifamory indray ka mitaky ny hiverenan-dRavelojaona Andry, filohan’ny Ligin’Analamanga teo aloha fantatra amin’ny hoe “La Pie”, izay naato tamin’ny asany tamin’ny taona 2018. “Mbola filohan’ny Ligy izy aminay. Any aminy ny taratasy manamarika fa ara-dalàna izy. Kamboty tsy misy mpiahy ny taranja eto Analamanga ka mitaky ny hiverenany. Tsy manome tsiny an’iza na iza izahay fa aleo mihavana ho fampandrosoana ny baolina lavalava”, hoy Randriamanana Armand, filohan’ny Seksiona Atsimondrano. Manamafy kosa ny Malagasy Rugby fa tsy afaka ny hiasa ao anatin’ny taranja baolina lavalava intsony io filohan’ny Ligin’Analamanga teo aloha io. “Voasazy nanomboka tamin’ny taona 2018 izy. Tsy afaka ny hanohy ny asany amin’ny maha filohan’ny Ligin’Analamanga intsony izy na hiasa ao anatin’ny taranja mandra-pahafatiny”, araka ny voalazan-dRakotomalala Marcel, filohan’ny Malagasy Rugby. “Manana taratasy avy amin’ny Filankevi-panjakana sy avy amin’ny minisitera ny tenako ka ara-dalàna ary vonona hifampiresaka amin’ny Federasiona ihany koa”, hoy kosa i La Pie. Sendra R. L’article Baolina lavalava- Analamanga :: Mitaky ny hiverenan-dRavelojaona Andry ny ankamaroan’ireo seksiona est apparu en premier sur AoRaha.
Manahy mafy ny tantsaha any amin’ny faritra Atsimo Andrefana manontolo noho ny fihanaky ny bibikely mpanimba voly katsaka sy hasy. Very hevitra ny mpamboly any amin’ny kaominina ambanivohitra maro, ravan’ny bibikely avokoa ny velaran-tany misy voly hasy. Efa mivarotra omby mihitsy ireo mpamboly ireo hividianana fanafody hamonoana izany bibikely izany, saingy tsy mety foana hatramin’izao. Hiteraka fahavoazana lehibe, mety ho tonga hatrany amin’ny kere, izany.Zara raha hisy 4 000 t ny vokatra hasy amin’ity raha tokony hahatratra 25 000 t. Ny ataon’ny mpandraharaha lehibe izany fa ny mpamboly madinika, mety tsy hisy horaisina. Tsy misy fidiram-bola azo antenaina, araka izany. Misy amin’ireo tantsaha madinika ireo aza ny nindram-bola amin’ireny “microfinances” ireny, tsy fantatra izay ho tohiny. Ny katsaka indray, anisan’ny foto-tsakafon’ny mponina any an-toerana, manahy mafy izy ireo fa tsy hisy horaisina ihany koa.Tokony ho efa fantatry ny mpikaroka ny hisian’ireo bibikely ireo, tokony ho efa niomana amin’izany izy ireo, indrindra amin’izao fiovan’ny toetr’andro izao. Koa miantso vonjy amin’ny minisiteran’ny Fambolena, ny fiompiana, ny jono ny mponina hijery vahaolana faran’izay haingana. Ny voly vary izao io, any Atsimo Andrefana ihany (lahatsoratra eo ambony), azo ambara fa mahabe fanantenana, satria eo ny Banky afrikanina momba ny fampandrosoana (Bad) mamatsy vola ny tetikasa. Ny voly katsaka sy ny hasy, hatramin’ny taona maro, foto-piveloman’ny olona any an-toerana, toa jerem-potsiny, angamba hiandrasana indray fanampiana avy any ivelany. R.MathieuL’article Atsimo Andrefana: simban’ny bibikely ny voly katsaka sy ny hasy a été récupéré chez Newsmada.
Manja: tratra tao anaty taksiborosy ny lehiben’ireo dahalo
Noraisim-potsiny tao anaty taksiborosy hihazo an’i Morondava ny lehiben’ny dahalo niaraka tamin’ny basy poleta vita gasy tompon’antoka tamina fanafihan-dahalo mitam-piadiana tao Manja, ny 3 desambra 2018 lasa teo. Raha ny tatitra avy amin’ny polisy, nanomboka tamin’io fotoana io, nahazo loharanom-baovao ireo polisy miasa ao Manja fa misy dahalo miisa 20 mirongo fitaovam-piadiana mihaodihaody ao Manja mikasa hanao fanafihana sy halatra omby amin’ny faritra tapany andrefan’ny Distrikan’i Manja. Nanapa-kevitra ny polisy tao an-toerana fa hanatanteraka savahao na antoandro na alina. Nahitam-bokany izany satria, ny alarobia 5 desambra 2018 tamin’ny 11 ora antoandro dia nisy olona nilaza tamin’ny polisy fa misy olona mampiahiahy miondrana ao amin’ny taksiborosy ho any Morondava. Napetraka ny sakana ka nanao fisavana, toy ny fanaon’izy ireo andavanandro, ny polisy. Nosavaina ilay taksiborosy ka tratra tokoa ity lehilahy ity miaraka amin’ny basy poleta vita gasy. Nilaza izy nandritra ny famotorana nataon’ny polisy fa izy no lehiben’ireo dahalo mpanafika amin’iny faritra andrefan’ny distrikan’i Manja iny. Handeha hitsena ny omby hangalarin’ireo dahalo any Analaiva Morondava no tena anton-diany kanjo izao tratra izao. Jean ClaudeL’article Manja: tratra tao anaty taksiborosy ny lehiben’ireo dahalo a été récupéré chez Newsmada.
Zon’olombelona: nomelohin’ny CNIDH ny fitifirana ireo gadra nitsoaka
Hentitra ary nahitsy sady nanome lesona. « Manameloka tanteraka izahay raha vao misy fanalana ain’olona, na ain’ny olon-tsotra, na ain’ny mpitandro filaminana… Tena manameloka ny fitifirana ireo voafonja miisa 21 ny mpiaro ny zon’olombelona tany Farafangana izahay », hoy ny mpikambana eo anivon’ny CNIDH, i Matavimana Ravao Georgine, omaly tao amina onjampeo iray. Nohitsiny fa tokony ho efa misy paikady sy fiofanana amin’ny fanenjehana gadra mandositra tahaka izany mba tsy hanalana ain’ olona. Tsy tokony ho any amin’ny faritra mety hahafaty no kendrena. Tsy vahaolana ny famonoana azy ireo satria olombelona izy ireo, araka ny nambarany hatrany.Fitarazohan’ny raharaham-pitsaranaMety misy tsy meloka koa aza na tsy mbola voatsara. « Maro ny azo atao ary mahalala izany ny mpitandro filaminana. Misy ny stratejia amin’ny fomba tsy analana ain’olona. Ohatra ny tongony fa tsy tifirina fahatany na any amin’ny mahafaty azy.. » hoy ihany ny eo anivon’ny CNIDH.Nanteriny koa anefa fa anisan’ny olana ary manamora ny fandosiran’ny gadra ny fahafenoan’ny fonja. Mihoatra tsy araka ny tokony ho izy ny ao anatiny. Tsy manaraka fenitra ny fotodrafitrsa sasany. Efa tamin’ny andron’ny mpanjana-tany.Fanadihadiana lalina Nitondra vahaolana koa anefa ny CNIDH ka anisan’izany ny fampitaovana, ankoatra ny fanofanana. « Tokony homena fitaovana hafahany manao ny asany an-tsakany sy an-davany ireo mpiandry fonja. Ny fitafiana, ny rano, ny jiro… Mba hampirindra ny fiaraha-monina amin’ireny toerana ireny», hoy ihany izy. Notsiahiviny koa fa anisan’ny anton’ny tranga tahaka izao ny fitarazohan’ny raharaham-pitsarana…Araka izany, andrasana ny ho tohin’ny raharaha sy ny fanadihadiana lalina manodidina ity fandosiran’ny gadra tao Farafangana ity.Synèse R. L’article Zon’olombelona: nomelohin’ny CNIDH ny fitifirana ireo gadra nitsoaka a été récupéré chez Newsmada.
Nifanaiky ho mandrakizay i Haridina sy i Henintsoa
Notanterahina omaly teny amin’ny fitandremana toby Fanantenana FLM 67 ha ny fanamasinana ny fitsofandranon’ny fanambadian’Andriandrantoson Riamaholy Haridina, mpanao gazety mikirakira ny vaovao ara-toekarena ao amin’ny gazety “Les Nouvelles” sy Rakotondraibe Hanitiriniaina Henintsoa, mpanao gazety mikirakira ny trangam-piarahamonina gazety Taratra, ao anatin’ny vondrona Ultima Media. Ny Pastora Rasolonjanahary Hobinirina Riri Harivelo sy Randrianarison Henri René ary Rakotondramanitra Mino Harivola no nifarimbona tamin’ny fitsofan-drano ny fanambadian’izy roa kely ireto. Nosafidin’izy ireo manokana ny tenin’Andriamanitra voasoratra ao amin’ny Tononkiran’i Solomona 8 : 7a “Na dia ny ony maro aza tsy mahavono ny afon’ny fitiavana ary ny renirano tsy mahapaoka azy”. Taorian’ny fanamafisana ny fanambadian’izy ireo dia niara-nikorana tamin’ny fianakaviana sy ireo namana aman-tsakaiza teny amin’ny Espace Sahamadio Ilafy izy roa kely. Mirary tokantrano sambatra ho an’i Haridina sy i Henintsoa, harahin-jazalahy sy zazavavy ny fianakaviamben’ny vondrona Ultima Media.Ny fanoratanaL’article Nifanaiky ho mandrakizay i Haridina sy i Henintsoa a été récupéré chez Newsmada.
Taorian’ny fanaovana joro: natsingevan’ny ranomasina ilay tovolahy maty an-drano
Natsingevan’ny ranomasina ny fatin’ilay tovolahy rendrika tsy hita tao amin’ny village touristique, afakomaly. Nisy, araka izany, ny joro ho fanajana ny fomban-tany nataon’ny fianakaviana ka taorian’izay dia nivoaka ny razana, araka ny fanazavan’ireo olona akaiky azy. Voalaza fa nilomano teo amin’ny ranomasina izy ka tsy hita popoka nony avy eo. Taorian’ny fanajana ny fombafomba rehetra, araka izany, vao natsingevan’ny ranomasina ny fatin’ilay niharam-boina. Anisan’ireo faritra mahasarika mpizahatany ny ao an-drenivohitry ny faritra Boeny ary toerana ifamotoanan’ireo mpizahatany ny eo amin’ny village touristique, saingy mila fitandremana anefa ny filomanosana eo amin’ny ranomasina.J.CL’article Taorian’ny fanaovana joro: natsingevan’ny ranomasina ilay tovolahy maty an-drano a été récupéré chez Newsmada.
Kitra – “UEFA Club Football Awards 2020”: hifampitady i Neymar sy i Mbappé ary i Lewandowski
Hotanterahina, ny alakamisy 1 oktobra ho avy izao, ny «UEFA Club Football Awards 2020», na ny fanolorana ny amboara ho an’ireo mpilalao mendrika, niatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa «Ligue des champions 2020». Anisan’ny andrasan’ny rehetra izay ho lohalaharana handrombaka izany, amin’ity. Hiady ny ho lohany i Neymar sy i Mbappé, avy amin’ny Paris St Germain, ary i Lewandowski, ao amin’ny Bayern de Munich, tombanan’ny maro fa manana herijika hahazo izany noho izy nahazo ny ho tompondakan’i Eoropa. Somary nahagaga ny rehetra kosa ny tsy naha tao anaty lisitra an’i Gnabry, mpilalaon’ny Bayern Munchen. Ankoatra izay, hifaninana eo amin’ny mpiandry tsatoby tsara indrindra ihany koa i Manuel Neuer, Bayern de Munich, sy i Keylor Navas, PSG ary i Jan Oblak, Atletico de Madrid. Mbola hangotraka ihany koa ny an’ny vodilaharana satria adin’ny samy Bayern ny fifanandrinan’i David Alaba sy i Alphonso Davies ary i Joshua Kimmich. Hifampitana kosa eo amin’ny irakiraka i Thiago Alcántara, Bayern Munchen, sy i Kevin De Bruyne, Manchester City, ary i Thomas Muller, Bayern de Munich.Ho an’ireo niatrika ny “Ligue Europa” indray, hiady izay ho mendrika i Éver Banega, mpilalaon’ny FC Séville, saingy efa nifindra ao amin’ny Al-Shabab, ary i Bruno Fernandes, Manchester United, sy i Romelu Lukaku, Inter de Milan. Sambany kosa no hisy fisafidianana izay ho mpanazatra mendrika, amin’ity. Mahatratra 32 ireo mpanazatra hifidy ka tsy mahazo mandatsa-bato ho an’ny mpilalaony ireo mpanazatrany. Ankoatra izay, 55 ireo mpanao gazety haneho ny safidiny. Tompondaka L’article Kitra – “UEFA Club Football Awards 2020”: hifampitady i Neymar sy i Mbappé ary i Lewandowski a été récupéré chez Newsmada.
Fampianarana mozika: “Misokatra ny Iarivo Art&Music”
Nitsangana ny «Iarivo Art&Music», ankehitriny, sekoly fampianarana mozika, noforonin’i Njakanirina Rakotonirainy. Efa maro ireo olona nisoratra anarana ho amin’ny fidirana ho mpianatra ao amin’ny sekoly Iarivo Art&Music, amin’izao, izay mifototra amin’ny “Piano”, saingy, misy zavatra hafa atao hanabeazana ny mpianatra ihany koa, ankoatra izay, raha tsy hilaza afa-tsy ny fampianarana valiha, hampifoha tsara ny masontsain’ny ankizy eo amin’ny zavakanto atao. Maro ny rantsan-taranja iseharan’ny olona, ao amin’ny sekoly, dia ny “klasika”, izay natao ho an’ny ankizy manokana, indrindra ny resaka solfezy, ao koa ny resaka mozika ankehitriny ”varieté”, ny Jazz ary ny Bagasy. Folo taona niseharana teo amin’ny tontolon’ny zavakanto, indrindra ny fampianarana « piano » na vata maroafitsoka ny tovolahy, nanomboka tao amin’ny CGM Analakely, avy eo EGM, mbola ampianarany ankehitriny, ary ny Iarivo Art&Music, izay natsangany. Marihina fa afaka mampianatra manokana ho an’ny olona liana amin’ny resaka zavakanto ny tenany, indrindra ny Piano. Manana vina, hisokatra bebe kokoa amin’ny lafin’ny mozika ny tovolahy, satria, tsy ny piano ihany akory ny “art” ary ny famoronana sy fikarohana mitohy foana, araka ny filazany.NarilalaL’article Fampianarana mozika: “Misokatra ny Iarivo Art&Music” a été récupéré chez Newsmada.